ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ဗျူး
ဟယ်...မယ်မျိုး တဂ်ပြီဆိုရင် ပါလေရာ ငါးပိချက်က ငါဖြစ်နေတာကိုး.. အဟတ်ဟတ်... စပ်စုချင်တယ်ဆိုတော့လဲ...မနု က ရေးပြရ။ အဲ ဟုတ်ပါဘူး မိုးယံက ရေးပြရဦးမှာပေါ့လေ.. ငှင်းငှင်းငှင်း
ဟင် ကိုမောင်မျိုးက ဗျူးတဲ့သူက ဘယ်သူလဲမှတ်တာ...
လက်စသတ်တော့ ကိုမိုးယံ ပြောပြောနေတဲ့ မယ်မျိုး ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်ကိုး ဟီးဟီး
လိမ္မာရစ်ကြပါဆိုတာ သေတော့မယ်သူတွေ မှာတာကွ.. မင်းကသေတော့မလား.. :P
ဗျူးတဲ့ထဲမှာ ဘာလို့ လူပျိုကြီးဖြစ်တာလဲ မပါဘူး.
ဟုတ်ပ...စာရေးနေကျလူဟာ ဆေးသမားလိုပဲ စာမရေးရရင် နေလို့ထိုင်လို့ သိပ်မကောင်းဘူး...အလုပ်လုပ်ဖို့ စက်ဖွင့်လိုက်ရင် ဘလော့ဘက်ပဲ ရောက်ရောက်သွားတယ်...အရေးကြီးတာတွေ ဘာသာပြန်ဖို့ ရေးဖို့ထက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘက်ပဲ များများသွားတယ်...ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့ဝါသနာထက် စာရေးတဲ့ဝါသနာက ဘေးကင်းပါတယ်လေ...Hold on, buckle up, fella...
ဗျူးတဲ့သူကလည်းဗျူးတတ်... ဖြေတဲ့သူကလည်းဖြေတတ် ... ဆိုတော့ ဖတ်ရတာ အရသာရှိသဗျ ... ... ;) ... ဗျူးသူနဲ့ဖြေသူ ကလောင်တူနေသယောင်ယောင် ... ;)
ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းဗျူး... သူများတွေကိုလည်း ဗျူးချင်တယ်ဆိုပါတော့...
အင်း..ဒါ့ကြောင့် စဖတ်လာကတည်းက တမျိုးပါလို့..၊း) မေးခွန်းတွေနဲ့ အဖြေတွေက သေသပ်ကျနလွန်းတော့ စာနဲ့မေး စာနဲ့ဖြေတဲ့ ဗျူးများလားတောင် ထင်မိသေး..၊ ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ ဆိုတော့လည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာပေါ့ညီရ..၊ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်ရေးတာ လည်း ကောင်းတာပါပဲ၊ ကိုယ့်စာဟာ ကိုယ့်တာဝန်ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တာဝန်ယူပြီးသား ဖြစ်တာပေါ့၊ ရေးလည်း ရေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးမို့ ရေးရသေးတာပေါ့ဗျာ..နော။း)
မောင်မျိုးရဲ့ ရိုးသားတဲ့ စာလေးတွေကို မကြာခဏ လာဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် မှတ်ချက်မရေးဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ ခရမ်းရောင်အိုးပုတ်ပန်းတွေအကြောင်း ရွာအကြောင်းလေးတွေကို များများဆက်ရေးပါ လို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကြီးကျယ်ခန်းနားမှုဆိုတာက သတ်မှတ်ချက်တွေသာ မဟုတ်လား။
ဟုတ် ဘကြီး လိမ္မာရစ်ပါမယ်..
အဲလေ ရွာက ဘကြီးခရီးထွက်ခါနီး မှာတဲ့လေသံနဲ့တူလို့ မှားသွားတယ်..
မောင်မျိုးကို ဗျူးဖို့စိတ်ကူးရတဲ့သူကို ချီးကျူးရမယ်နော်
သတင်းထောက်လေး အင်တာဗျူးဝါလေး ဘာလေး လုပ်ပါလို့ လမ်းကြုံရင်ပြောပေးပါလား။
ကဒါဖီ သတင်းတွေ အာရပ်ကမ္ဘာအရေးအခင်းက သတင်းတွေ သွားယူခိုင်းမလို့ပါး)
မောင်မျိုးရဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ရေးတတ်တဲ့စာလေးတွေက တစ်မျိုးဆွဲဆောင်မှုကောင်းနေတာမို့ ဟန်ဆောင်မှုမပါဘဲ စာရေးတတ်သူလို့ နားလည်လက်ခံပါတယ်။ အများကြီးရေးပါဦးလို့
ဗျူးသူက ဒီကောင်ဆိုလို့ ဘယ်ကောင်လဲ သွားကြည့်တာ ဒင်းကိုး .. :P
ရွာထဲမှာ အပျိုတွေ ပျောက်ပျောက်သွားတိုင်း ပုန်းနေတတ်တုန်းလား :P
ဒါနဲ့ အမှန်အတိုင်း အဟုတ်တိုင်း ဖြေရမှာလား
မဟုတ်တာ အဟုတ်လုပ်ပြီး အဗျူးခံရမှာလား
နင်သွားလိုက်တော့ လို့တော့ မပြောနဲ့ပေါ့ဟာ :P
ဟင် . .ဘလော့နဲ့ အဆက်ပြတ်နေပြီး အခုမှ ပြန်ဝင်တာနဲ့ တန်းပြီးတော့ တဂ်ပို့စ် မိတော့တာပဲ။
ခဏစောင့် . . . စိတ်လေး နည်းနည်း ငြိမ်တာနဲ့ ရေးပေးမယ်။
ကဗျာတွေကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအထူး။
ဘလော့ကို သဘောထားပုံ သဘောကျတယ်။ အရင်ကချစ်သူ အခုကလေးအမေဆိုပဲ။ ကလေးတောင် ၅ ယောက်တဲ့ .. တော်တော်သွက်တဲ့ ကိုမျိုး .. ဒီရုပ်နဲ့ မထင်ရဘူး :P
ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျ .. စာရေးတာပဲ .. အကြောင်းအရာများများ ရေးနိုင်မှမဟုတ်ပါဘူး .. personal ပဲဖြစ်ဖြစ် သီးခြားခွဲထွက်တဲ့ theme နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် .. ကိုယ့်ခံစားချက်တစ်စုံတစ်ရာက တစ်ပါးသူကို ကူးစက်နိုင်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။
စာတွေရေးပြီး ပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုမျိုးရေ